Igwe Mmiri Ntugharị HLQ, na-emepụta mmepụta ngwá ọrụ
NKWUKWU NDỊ ECHICHE CO LTD (Aha mbụ: DaWei Induction Heating Machine Co., Ltd) amụrụ ihe na igwe na-ekpo ọkụ na igwe na-ekpo ọkụ na ultrasonic maka ndị ọzọ karịa afọ 15. Igwe ndị ahụ na-ekpuchi Igwe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, igwe na-ekpo ọkụ nke ultrasonic, ultrasonic metal welder, Igwe ikuku na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, Systemsgbanwe Brazing Systems, Ngwunye Ngwá Ọrụ Na-agba Ọkụ, usoro mmezi ọkụ zuru ezu, Aluminom na Ọkụ Ngwá Ọla, Ngwunye Ngwunye Ngwọta nke Ọma. Welders tube & Kwesịrị ightgbatị Usoro. A na-eji ha arụ ọrụ na ọgwụgwọ ọkụ, njikọta, brazing, ịgbado ọkụ, ịgbagharị, agbaze, preheating na ngwangwa ngwangwa.
Igwe ọkụ ọkụ itinye ihe ndị kasị elu electric mmiri na pụrụ iche elu-ọhụrụ tech.The ha nwere ike ikpo metal ngwa ngwa na ikpe. Ha nwekwara ike banye nonmetal ka ikpo ọla ruo mgbe ọla gwunye na-enweghị ịkpọtụrụ na ọla
ozugbo. Tụlee na usoro ndị ọzọ na-ekpo ọkụ, igwe na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ anyị nwere ọtụtụ uru: ọnọdụ siri ike zuru oke, njide onwe onye na ọrụ nchedo onwe onye. Ọ na-amalite site na nrụgide chọrọ na mmiri, na-ewere obere ala ala ma chọọ obere mbido na oge mmechi, kpo oku n'enweghị nsogbu, na-akwụ ụgwọ n'enweghị mmetọ ọ bụla.
Na ụlọ ọrụ mmepe, anyị ụlọ ọrụ na-akwụ ndị ọzọ na ndị ọzọ anya nnyocha & mmepe na ọrụ mgbe ahịa. Anyị na-agbaso ISO9000-2000 na nhazi anyị. Companylọ ọrụ anyị na-enweta ọmarịcha aha anyị maka igwe dị elu ma dị mma.
induction kpo oku kpo oku